Esdrasa 6 - Ny Baiboly
Esdrasa toko 6
Didin'i Dariosa - Ny namitana ny tempoly: ny nitokanana azy sy nanaovana ny Paka.
1Dia nanome didy Dariosa mpanjaka, ka dia nokarohina tao amin'ny trano fitehirizan-taratasy izay nitahirizana ny rakitra tany Babilona. 2Ka indro hita tao Ekbatana, tanàna mimanda ao amin'ny faritanin'i Media, horonan-taratasy anankiray nisy izao filazana voasoratra izao:
3Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Sirosa mpanjaka, dia izao no didy navoakan'i Sirosa mpanjaka: Ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema, dia aoka haorina indray io trano io ho fitoerana fanaterana sorona, ary aoka hatao mafy ny fandatsaham-pototra. Ho enimpolo hakiho no hahavony, ary enimpolo hakiho koa ny sakany, 4ka hatao vato vaventy voapaika telo an-dàlana sy hazo iray an-dàlana; ary haloa avy ao an-tranon'ny mpanjaka izay lany aminy. 5Fanampin'izany, ny fanaka volamena sy volafotsin'ny tranon'Andriamanitra izay nalain'i Nabokodonozora tany amin'ny tempoly any Jerosalema dia haverina ka dia hoentina ao amin'ny tempoly any Jerosalema, hatao amin'ny fitoerany teo, ka hapetrakao ao an-tranon'Andriamanitra.
6Koa ankehitriny, ry Tatanaì governora any an-dafin'ny ony, sy Starbozanaì, mbamin'ireo namanareo ao Afarsàka, hianareo any an-dafin'ny ony, dia mihataha tsy hitoetra ao, 7ka avelao hotohizana ny asa amin'ny tranon'Andriamanitra; aoka ny governoran'ny Jody sy ny loholon'ny Jody hanorina izany tranon'Andriamanitra izany indray amin'izay fitoerany teo. 8Ary izao no didy omeko anareo ny amin'izay tokony hataonareo amin'ireo loholon'ny Jody, hanorenana indray io tranon'Andriamanitra io: ny haren'ny mpanjaka, ny hetra aloan'ny any an-dafin'ny ony, no handoavana izay lany marina amin'ireo olona ireo, mba tsy hiatoato izy. 9Ny zavatra ilaina hanaovana ny sorona dorana, ho an'Andriamanitry ny lanitra, na vantotr'ombalahy, na ondralahy amam-janak'ondry, na varimbazaha, na sira, na divay aman-diloilo, araka ny fandaharana ataon'ny mpisorona ao Jerosalema, dia homena azy isan'andro tsy tapaka, 10mba hanaterany sorona tsara hanitra ho an'Andriamanitry ny lanitra, dia hivavahany ho an'ny ain'ny mpanjaka sy ny zanany. 11Izao koa no didy omeko: Raha misy manova izao teny izao, dia hotsoahana ny sakamandimby iray amin'ny tranony, ka dia hahantona sy haompana eo izy, ary ny tranony koa hatao antontam-piringa, noho izany. 12Ary ilay Andriamanitra izay mampitoetra ny anarany ao anie hanongana ny andriana amam-bahoaka izay haninji-tanana hanova izao didy izao sy handrava izany tranon'Andriamanitra any Jerosalema izany. Didy nomeko izaho Dariosa, ity; ka tsy maintsy toavina an-tsakany sy an-davany.
13Notanterahan'i Tatanaì, governoran'ny any an-dafin'ny ony, sy Starbozanaì, mbamin'ireo namany, an-tsakany sy an-davany, ny didy nalefan'i Dariosa mpanjaka. 14Ka dia rafitra nanao ny trano ireo loholon'Israely, ka nandroso tsara ny asa, noho ny faminanian'i Akzea mpaminany, sy Zakaria zanak'i Adao. Nanao izy dia nahavita araka ny didin'Andriamanitr'Israely sy araka ny didin'i Sirosa, Dariosa, Artakserksesa, mpanjakan'i Persa. 15Tamin'ny andro fahatelon'ny volana Adara, taona fahaenina nanjakan'i Dariosa mpanjaka, no nahavitan'ny trano.
16Ary ny zanak'Israely, ny mpisorona, ny levita, ary ny olona sisa tamin'ny zanaky ny fahababoana, dia samy nitokana ny tranon'Andriamanitra tamin-kafaliana. 17Izao no naterin'ny olona hitokanana io tranon'Andriamanitra io: ombalahy zato, ondralahy roan-jato, zanak'ondry efa-jato, ary osilahy roa ambin'ny folo, araka ny isan'ny fokon'Israely ho sorona noho ny ota, ho an'Israely rehetra. 18Dia notendreny ny mpisorona, araka ny antokony avy, sy ny levita araka ny fizarany avy, hanao ny fanompoana an'ilay Andriamanitra izay ao Jerosalema, araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Moizy.
19Tamin'ny andro fahaefatra ambin'ny folon'ny volana voalohany, dia nanao ny Paka ny zanaky ny fahababoana. 20Fa efa samy nanamasina ny tenany ny mpisorona sy ny levita tsy an-kanavaka, ka samy efa madio avokoa. Dia namono ny Paka izy ireo ho an'ny tenany. 21Nihinana ny Paka ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana, mbamin'izay rehetra niala tamin'ny fahalotoan'ny firenena tompon-tany, sy nanatona azy hiara-mitady an'ny Tompo Andriamanitr'Israely. 22Tamin-kafaliana no nanaovan'izy ireo ny fetin'ny Azima mandritra ny hafitoana; fa nampifalian'ny Tompo izy, tamin'ny nitarihany ny fon'ny mpanjakan'i Asiria hanampy azy ireo sy hanohana ny tànany amin'ny asa momba ny tranon'Andriamanitra, dia ny Andriamanitr'Israely. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0985 seconds